Bose QC35 Wireless headphone ukubuyekeza - Izindaba Rule
I Bose QC35s abaphelele. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela abazinikele ithrekhi skip izinkinobho kanye nokusetshenziswa esokhethini 2.5mm esikhundleni se-3.5mm embonini standard ecasula.
The headphones entsha Bluetooth kusukela Bose wavalelwa ngaphandle kwezwe ezinomsindo abakuzungezile futhi ugcwalisa ingqondo yakho ngomculo sweet, ngaphandle isidingo sezintambo
Lesi sihloko osesikhundleni “Bose QC35 headphones wireless: ngomsindo umane esingenakuqhathaniswa ekhansela” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili mhlaka 21 June 2016 06.00 UTC
Bose headphones babanjwa njengoba standard igolide lomsindo esebenzayo ekhansela kufunwe singekho ngoba. Kodwa ikhona yini kulezi entsha QC35 imodeli inkampani sika, Bluetooth headphones walo wokuqala ngomsindo-ukukhansela, siphile ngokuvumelana okulindelwe?
The mirror umfanekiso QC25
The headphones bayeke ukuhamba noma flat for saqhubeka icala. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I QC35s kukhona pair of QC25s nge Bluetooth kuzo ngokuyisisekelo, futhi kusukela ngaphandle kunzima ukutshela laba ababili baqhelelane ngaphandle uma wazi ukuthi yini oyifunayo: bayazivikela umbala athe ukuhluka - iyatholakala ku ethafeni black noma isiliva kunokuba ezimbili-tone imibala - nibe niphuza indebe kwesokudla has ezintathu zokulawula, i LED kanye slot microUSB.
I kwesokunxele endlebeni indebe has a 2.5mm headphones port, okusho ukuthi ingasetshenziswa njengendlela headphones zakheka kufakwe noma ingafakiwe i ngomsindo ekhansela ku, kepha uzodinga ukusebenzisa ikhebula wawuhlanganisa noma ukuthenga 3.5mm ukuze 2.5mm-adaptha.
I QC35s waphatheka Ngokuqonda wakha. I bands adjustable bazizwa okuhlala isikhathi eside, njengoba enza yibhande lasebunzini phezulu, wamboza pleather nge elithambile pad negogo-like ngokumelene ikhanda. I izindebe indlebe kuthiwa zalungisa nge soft-pleather pads kanti ngaphakathi contoured ngakho uhlezi indlebe.
Ziyakwazi ezinye ukhululekile kakhulu futhi nice-to-bagqoke headphones Ngiye ngajabulela ukuba agqoke. Bahlaziya 310g, kodwa ungazizwa esinda kakhulu eziyibambe, uhlale ekhanda lakho kalula futhi musa ukuhamba uma uhamba, kuyilapho kungenjalo ifaka ingcindezi ngokwedlulele kunoma iyiphi indawo eyodwa ekhanda lakho. I encapsulate ngokuphelele izindlebe zakho ngaphandle ebathinta, kodwa kukhona kuqhathaniswa compact futhi ezicashile for headphones ezinkulu phezu-the-indlebe.
Baphinde bayeke ezokuthutha, ne izindebe alo okukumugqa flat ne yibhande lasebunzini phakathi angena icala labo kuqhathaniswa icwecwe. Akuzona encanyana lapho eligoqiwe, kodwa ezincane ngokwanele ukuze abenze umthwalo osindayo esikhwameni lwabagibeli sika.
Izilawuli kanye zokuxhuma
Indebe yokunene enza konke, nge zokulawula, amandla switch, microUSB izisekelo kanye NFC ibala. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ilungelo indlebe indebe lapho zonke isenzo kwenzeka. It has a pair of evolumu Flanking kokuhlaba ikhefu / inkinobho play. Azikho ithrekhi abazinikele skip izinkinobho, okuyinto kancane esidumazayo, kodwa kabili noma kathathu ngokucindezela inkinobho play thembeke imigqomo phambili noma emuva.
Ilungelo indlebe indebe Ubuye inkinobho amandla, okuyinto wena Flick nanelungelo yesithathu ukubeka headphones kumodi yokumatanisa, uma uludinga, okuyinto wenza i-iPhone. Abasebenzisi abaningi Android uyomane ube ukuzuza Smartphones zabo on the spot NFC - aphinde ngakwesokudla indlebe indebe ukubhanqa nabo nge-Bluetooth.
Uxhumano Bluetooth kokubili smartphone kanye PC kwaba edwaleni kuzo zonke izimo, okuvumela kimi ukuba uzibuze emhlabeni ikamelo ngaphandle kokulahlekelwa uxhumano nasesizweni emgwaqeni ifoni ephaketheni lami ngaphandle udaba.
Like headphones Bluetooth kunazo zonke QC35s ngeke ukuxhuma kumadivaysi ezimbili ngesikhathi esisodwa, uzothatha isinyathelo njengama-earphone for yefoni kungaba ukucupha Google Now noma Siri smartphone. izinga Call ngokusebenzisa headset kwaba kuhle kakhulu.
Noise kukhanselwa nesizungu
Kwesokunxele endlebeni indebe has a headphones 2.5mm port ngokusebenzisa 2.5mm olunikezwe bendabuko 3.5mm ikhebula. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Into engcono kakhulu mayelana QC35s wukuthi ukubenza phezu kunjani iveli uthule uye wafted phezu kwenu, kokukhipha nesiyaluyalu esaba khona isizinda, kungakhathaliseki emgwaqweni, esitimeleni noma ehhovisi.
Ubuchwepheshe Bose umsindo ekhansela, okuyinto uqaphe umsindo engenayo usebenzisa imibhobho futhi ithumela ephambene umsindo wave usebenzisa izikhulumi ukuze asule umsindo ngaphambi kokuthi bashaye indlebe yakho sigubhu, kuthiwa the best ebhizinisini. Kuyinto ngempumelelo kakhulu, nakuba kunjalo hhayi Izilimi ngaphambi the best of the ukuphumula. Kuyini miles kangcono kunanoma iyiphi enye headphones ngomsindo-ukukhansela Ngiye ngazama kuyinto Ukuvinjwa yekwentiwa komsindo.
Bose upaka izinkomishi indlebe ngezinto umsindo ethakazelisayo, okuyinto, kuhlangene esebenzayo ubuchwepheshe ngomsindo ekhansela, usebenza ngendlela emangalisayo ngempumelelo, uvimba engazelelwe, ebukhali umsindo lowo msindo ekhansela zimpi nge.
Azikho headphones kangcono okwamanje ngoba amandla obukhulu ukuzihlalela wena nezwe, wireless noma ngenye, ngaphandle QC25s.
I izinkomishi indlebe ezikahle kanye nokuhlinzeka atihambi todvwa esihle emhlabeni ngaphandle. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ubuhle ukuthi ukuzihlukanisa omuhle wukuthi umculo ngempela ukucula ngasiphi ivolumu. Mina ngazithola ngokungaguquguquki ukulalela umculo wami at Imiqulu ephansi kakhulu, okuyinto enhle isikhathi eside ezindlebeni zami.
The headphones kuzwakale esikhulu. Abanye abantu musa like the way Bose imikhiqizo kuzwakale - kukhona nakanjani a "Bose umsindo" - kodwa abe balance okukhulu, bass okuhle lapho edingeka bese ukuhlukaniswa okukhulu okwenzeka phakathi imisindo zomculo. Abazi kuzwakale njengento enhle njengoba iqoqo audiophile-grade £ 300 headphones kunezintambo, kodwa abantu abaningi ngibathande.
Ngokuqinisekile awekho a pair of Beats, kodwa ungaveza bass ngempela ejulile uma kwaphoqa. Into umxhwele kakhulu wukuthi esebenzayo nomsindo Ikhansela akuphazamisi izinga audio,ngokungafani kwamanye headphones eziningi ezifanayo.
With Bluetooth QC35s ngeke outlast ngisho olude indiza uma zizohamba ibanga. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I QC35s wakufeza lokho okwakulindelwe bephonsa azungeze 5% Ihora ukulalela Bluetooth okuhlala njalo cishe ngayinye 20 amahora emkhatsini amacala lapho ngilalele-Bluetooth, futhi isikhathi eside uma ishintshela kokungavinjelwe koxhumana zakheka. Kukhona akuzona eminingi elishajekayo wireless ngomsindo-ukukhansela headphones ezihlala isikhathi eside, inqobo nje uma Bose phakathi amacala.
Kukhona futhi auto-standby esisiza alula ukuphila kwebhetri futhi kungenziwa abangelwe emva njengoba kancane njengoba five minutes noma nje kwamahora amathathu bangabe besasebenza, noma ivaliwe ngokuphelele. Ukuze aphaphame kokubekwe eceleni wena nje ibenze omunye izinkinobho.
I headphones ungaqhubeka ezizosetshenziswa uma amandla siphela usebenzisa ikhebula wawuhlanganisa, kodwa akuzwakali akamuhle kangako. Bathatha nje amahora amabili kuya ukukhokhisa ngokugcwele nge microUSB.
I 2.5mm headphones nezisekelo kuyacasula - kusho ukuthi awukwazi nje sivale yimuphi ikhebula headphones ubudala e
A abazinikele amandla switch kungcono kakhulu kunokuba ubambe inkinobho amandla 5 imizuzwana yokuyivula noma off
The headphones akhulume kuwe ememezela iphesenti ibhethri bese amadivaysi uxhumekile qalisa lapho amadivayisi ukuxhuma noma unqamule usebenzisa umbhalo ukuveza
Insikazi izwi English yenza kuzwakale kancane unesithakazelo kumuntu, nge uptick kunangonyaka ekupheleni izinombolo noma izinhlamvu, okuyinto cishe kuzwakala sengathi wathi yayo ngokucisha iso futhi umomotheka
Izwi kwenza abanye ukukhetha curious - ukubanjwa OnePlus 3 smartphone kwenziwa isaziso sokuthi O-N-E plus ezintathu
Kukhona i Android/iOS app evumela ukuthi wena ukuphatha namadivayisi abhanqiwe, ukucisha kukuphi yezwi, ukushintsha igama headphones akho futhi uphathe timer auto-standby
I Bose QC35 kubiza £ 290, okubenza babe £ 40 nangaphezu kwezinwele QC25 zakheka, £ 160 ngaphezu kwezinkundla Philips SHB9850NCs, £ 100 ngaphezu kwezinkundla Plantronics BackBeat Pro, £ 70 ngaphezu kwezinkundla Sony h.ear on Wireless NC headphones, kodwa £ 9 ushibhile kakhulu ukwedlula Parrot Zik 2.0 headphones futhi £ 90 ashibhile kakhulu ukwedlula Sennheiser Momentum Wireless.
Kodwa labo niggles ezincane zedlula kude noma yikuphi kepha nomsindo kumnandi ekhansela nesizungu, induduzo kanye umsindo omuhle. Ubathola ezibizayo headphones non-fashion, futhi bezingeke kukwenze ibukeke Dr Dre, kodwa kukufanele zonke penny uma ngisuka ezokuthutha zomphakathi, siyasokola ukuze agxilise in uhlelo ehhovisi evulekile, fly kuphi noma nje ufuna kancane sokuthula nokuzola ekuphileni kwakho.
I Bose QC35s kukhona umsindo best ekhansela headphones imali engakuthenga kwamanje, futhi mhlawumbe best Bluetooth headphones kakhulu. Ubathola brilliant. Kungani kwadingeka silindele isikhathi eside kangaka ngabo, Anginalwazi.
Buhle: best-in-class nomsindo ekhansela nesizungu, ukuphila omkhulu ibhethri, umsindo omkhulu, ntofontofo, phinda yokugibela, Bluetooth, NFC, ehloniphekile ukuphathwa lokusebenza
Bawo: 2.5mm headphones port, akukho track abazinikele yeqa Izilawuli
Thepha uphawu NFC nefoni yakho ukuze uthole zokumatanisa osheshayo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Parrot Zik 2.0 ukubuyekeza: headphones wireless yakhelwe by Philippe Starck
Abayisithupha best ngomsindo-ukukhansela headphones kusuka 2014 ukuthulisa esendleleni
Ezinhlanu best headphones Bluetooth kusuka 2015 ukuze bagqashule kulo mkhuba samakhebula
Isigaba, umculo Digital kanye alalelwayo, Gadgets, Ama-headphone, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Technology, UK Technology
← Umdlavuza Webele Cell Growth okuhlanganisiwe by Kwamathambo Drug $4 Indian smartphone 'izohamba kule viki’ →